Chelsea oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Newcastle United oo ay ku booqatay garoonka St James’ Park… +SAWIRRO – Gool FM
Chelsea oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Newcastle United oo ay ku booqatay garoonka St James’ Park… +SAWIRRO
Dajiye November 21, 2020
(England) 21 Nof 2020. Chelsea ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Newcastle United oo ay ku booqatay garoonka St James’ Park, kaddib marikii ay kaga soo adkaatay 0-2, kulan qeyb ka ahaa Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barba 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Chelsea.
Daqiiqadii 10-aad ee dheesha Chelsea ayaa qabatay hoggaanka, kaddib markii uu gool iska dhaliyay xiddiga kooxda Newcastle United ee Federico Fernandez, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 0-1.
Daqiiqadii 65-aad Chelsea ayaa la timid gool labaad kaddib markii uu Tammy Abraham ka dhigay 0-2, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Timo Werner.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 0-2 ay kaga soo adkaatay Chelsea kooxda Newcastle United oo ay ku booqatay garoonka St James’ Park, Blues ayaana si ku meelgaar ah hoggaanka u qabatay dhanka kala sarreynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay uruursatay 18 dhibcood, waxayna farqi goolal ah kaga hoggaamineysaa Leicester City oo habeen dambe la balansan Liverpool.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Newcastle United iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Villarreal iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey